Le journal du 05 avril 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
©CUA - Commune Urbaine d'Antananarivo
Les sapeurs-pompiers facilitent la communication afin de prévenir des incendies et des divers dangers.
Vidin’entana tsy mitsaha-miakatra : nahoana no tsy afaka ampidinina fa ferana fotsiny ihany ?
Trangana haintrano eto Antananarivo : nihena 27% hoy ny Sampana mpamonjy voina.
MAKI U20 lehilahy : hiatrika ny fiadiana ny amboaran’ny Afrika amin’ny rugby ”Barthes Trophy”.
Commune Antananarivo renivohitra: Mbola andrasana hanoratra ao anatin’ny fandraiketana an-tsoratra ireo mapanakanto sy ny mpisehatra ara-kolotsaina.
Studio Sifaka · 2022 - 04 - 05 NY VAOVAO